चन्द्रमणि भट्टराई | २०७६-०५-०५ | १२६५ ३
मेलमिलापले विवादको न्यायिक समाधान दिन्छ, मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरेपछि महानगरमा मुद्दाको चाप घट्ने मेरो बिश्वाश हो । — मेयर शाक्य
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरका हरेक वडा १÷१ वटा र केन्द्रमा एउटा गरी ३३ वटा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना हुने भएका छन् । यसका लागि मानव संशाधन महाशाखाले ३ चरणमा सञ्चालन गरेको तालिमबाट ७४ जना ‘मेलमिलापकर्ता’ उत्पादन भएका छन् भने अन्यत्र तालिम लिएका ६० जनाले महानगरले सञ्चालन गर्ने मेलमिलाप केन्द्रमा काम गर्न सूचीकृत हुनका लागि निवेदन दिएका छन् । यसरी १३४ जना मेलमिलापकर्ता महानगरमा काम गर्ने गरी तयार भएका छन् । यीमध्ये केन्द्रमा काम गर्न ४७ जनाको निवेदन परेको छ ।
यसरी काम गर्न इच्छुक मेलमिलापकर्तालाई बुधबार राष्ट्रिय सभा गृहमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा महानगरका प्रमुख बिद्यासुन्दर शाक्यले जिम्मेवारीका शपथ ग्रहण गराउनुभएको थियो भने तालिम प्राप्त मेलमिलापकर्तालाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश एवम् मेलमिलाप परिषद्का अध्यक्ष ईश्वरीप्रसाद खतिवडाले प्रमाण पत्र प्रदान गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै महानगरका प्रमुख बिद्यासुन्दर शाक्यले भन्नुभयो — पक्ष बिपक्षका आफ्ना—आफ्नै अडानका कारण विवाद सृजना हुन्छ । यी दुवै गरीका अडानलाई दुवै पक्षको जीत हुने ठाउँमा पु¥याउन मेलमिलापकर्तामा धैर्यता, सहनशिलता र कुशलतापूर्वक काम गर्ने सीप चाहिन्छ । यो काम सजिलो छैन तर पनि म बिश्वाश गर्छु कि — हरेक वडामा एक÷एक वडा मेलमिलाप केन्द्र भइसकेपछि महानगरमा आउने मुद्दाको संख्यामा कमी आउनेछ । अहिले सम्पादन भइरहेको न्याय प्रणालीका बिषयमा उल्लेख गर्दै मेयर शाक्यले भन्नुभयो — अहिले मेयर, उपपमेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले छुट्टाछुट्टै इजलासबाट न्यायिक समाधान खोज्ने काम गरिरहेका छौं । मेलमिलापकर्ताको सक्रियताले हामीकहाँ आउने मुद्दाको चाप कम हुनेछ । यसबाट नागरिकको, मुद्दा मामिलामा हुने समय र सम्पत्तिको खर्च घट्छ ।
कार्यक्रममा न्यायाधीश खतिवडाले — समाजका सृजना भएका बिबादमध्ये १५ प्रतिशत मात्र अदालतमा पुगेको तथ्य उल्लेख गर्दै बाँकी ८५ प्रतिशत मुद्दा सम्बन्धित निकायमा नपुगी समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको बताउनुभयो । यिनीहरुलाई अदालतमा ल्याउनु पर्छ भन्ने होइन, तर विवादलाई त्यत्तिकै छोड्दा, सामान्य समस्या जटिल बन्न सक्छ । औपचारिक न्याय प्रणालीका सीमा हुन्छन् । उहाँले थप्दै भन्नुभयो — त्यसैले पक्ष बिपक्ष राखेर गरिने मेलमिलाप विवाद निरुपणको सबैभन्दा उत्तम उपाय हो । त्यसै अवसरमा बोल्दै उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले भन्नुभयो — उपप्रमुखले कानुनबमोजिम प्राप्त गरेका जिम्मेवारीमध्ये न्यायिक समितिको काम, मलाई बढी महत्वपूर्ण लाग्छ । उचित समयमा निर्णय नहुनु न्याय नपाउनुसहर हो । त्यसैले अब वडामा गठन हुने मेलमिलाप केन्द्रलाई शशक्त बनाउनमा मेरो ध्यान जानेछ । यसले महानगरको न्यायिक समितिमा आउने विवादलाई वडा तहमै समाधान गर्नेछ ।
मेलमिलापबाट बिबाद समाधान गर्ने बिधिलाई नेपालमा विस्तार गर्न काठमाडौं महानगरले नमूना तयार पारेको मैले बुझेको छु । कार्यक्रममा बोल्दै महानगरका कानुनी सल्लाहकार टीकाराम भट्टराईले भन्नुभयो, समस्यालाई समयमै पहिचान गर्न सकियो भने अदालतमा पुग्नु पर्ने मुद्दा त्यही सकिन्छ । त्यसैले मेलमिलापको महत्वलाई बुझाउँदै र परिपक्व प्रयोग गर्दै लैजानुपर्छ । नेपाल मेलमिलाप समाजका अध्यक्ष शंकर सुवेदीका अनुसार — मेलमिलाप परिषद्बाट स्वीकृत पाठ््यक्रममा आधारित मेलमिलाप सम्बन्धि तालिम प्राप्त व्यक्तिले मात्र मेलमिलाप गराउन पाउँछन् । यो तालिम ४८ घण्टाको हुनेछ । तालिममा एक पटकमा २७ जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाई सहभागी गराउन पाइँदैन । मानव संशाधन बिकास महाशाखाका प्रमुख बखतबहादुर साउदका अनुसार — सम्पन्न तालिममा, मेलमिलाप गर्ने तरिका, कस्ता मुद्दामा मेलमिलाप गराउन सकिन्छ? स्थितिलाई कसरी सामान्य बनाउने? यस सम्बन्धि कला र औजार सम्बन्धि सीप सिकाइएको थियो । त्यस्तै तालिमकर्ता आफैंलाई मुद्दाको पक्ष बिपक्ष र मेलमिलापकर्ता बनाएर बिवाद मिलाउने प्रयोगात्मक अभ्यास गराइएको थियो । तालिममा वडाको शिफारिसमा हरेक वडाबाट एकजना पुरुष र एकजना महिलालाई सहभागी गराइएको थियो । यो सामाजिक सेवाको काम हो । यसमा दुवै पक्षलाई न्याय दिने प्रयास गरिन्छ । महानगरका कानुनु महाशाखा प्रमुख बसन्त आचार्य, मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्ने बिषयमा प्रतिक्रिया दिँदै भन्नुहुन्छ — वडामा मेलमिलाप सञ्चालन गर्न कम्ती एउटा कोठा, फर्निचरलगायतका आधारभूत पूर्वाधार तयार गर्दै केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्दै जाने योजना छ । यसबाट स्थानीय स्तरमा शान्ति स्थापनामा ठूलो सहयोग पुग्नेछ ।
पक्ष बिपक्षबीच मेलमिलाप गराउन कानुन बिषय पढेर मात्र हुँदैन, यसका लागि तालिम नै लिनुपर्छ । तालिमपछि शपथ ग्रहण हुन्छ । त्यसपछि मात्र पक्ष बिपक्षलाई मेलमिलाप गराउन पाइन्छ ।
मेलमिलाप पुस्तक बिमोचन
बुधबार सोही कार्यक्रममा बसन्त आचार्यले लेख्नुभएको मेलमिलाप सम्बन्धि पुस्तक सार्वजनिक गरियो । न्यायाधीश खतिवडा, मेयर शाक्य, महानगरका काुननी सल्लाहकार, मेलमिलाप तालिमका प्रशिक्षकहरुले संयुक्त रुपमा सार्वजनिक गर्नुभएको थियो ।
नेपाली न्याय प्रणालीका लागि यो नयाँ गन्तव्य हो । पुस्तकमाथि टिप्पणी गर्दै मेलमिलाप परिषद्का अध्यक्ष खतिवडाले भन्नुभयो — अनौपचारिक पद्धतिबाट न्याय बितरणका लागि काम थालेको १५ बर्ष भयो । यस अवधिमा मेलमिलापकर्ताका लागि उपयुक्त श्रोत सामाग्री थिएनन् । यो पुस्तकले त्यो अभाव पूरा गर्नेछ । पुस्तकमा भएका बिषय र तिनको प्रस्तुतिमाथि टिप्पणी गर्दै, महानगरका कानुनी सल्लाहकार टीकाराम भट्टराईले — पुस्तकमा महानगरले न्याय सम्पादन गर्दा अबलम्बन गरेका बिधिलाई समावेश गरिएकोले यो जनप्रतिनिधि, कर्मचारी सबैका लागि संग्रह गर्नुपर्ने पुस्तक भएको बताउनुभयो ।
पुस्तक लेखनका बिषयमा कुरा गर्दै लेखक आचार्यले — पुस्तक तयार पार्न २ बर्ष लागेको र यसका लागि करीब ५० वटा भन्दा बढी राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय पुस्तक र नजिरको अध्ययन गरेको उल्लेख गर्नुभयो । विवाद हरेकसँग छन् । ती बिवादलाई आफ्नै तहमा कसरी समाधान गर्न सकिन्छ, यसलाई सुक्ष्म ढङ्गबाट प्रस्तुत गर्न प्रयास गरेको छु । आचार्यले थप्दै भन्नुभयो — यो सबैका लागि सधैँका लागि हो । म चाहन्छु, यो किताब सबैको झोलामा होस् ।
लेखक आचार्य महानगरका निर्देशक, कानुन महाशाखाका प्रमुख हुनुहुन्छ ।
महानगरमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि नाम दर्ता शुरु Previous Post
हुने काम भए एक छिन नरोक्नु, नहुने भए कसैले नगर्नु — मेयर शाक्य Next Post